Cayayaanka Pion | February 2020
Shirkadda Valagro waxay soo bandhigaysaa New YieldON Biostimulator ee Ukraine
Ugu Weyn Ee Cayayaanka Pion
Cudurada ugu waaweyn iyo cayayaanka ee pion: sababaha iyo daaweynta
Peonies, marka la barbardhigo ubaxyada kale ee beerta ubaxa, waxaa loo arkaa inay u adkaysato cudurada iyo cayayaanka. Laakiin iyaguna way dhaawici karaan. Kuwa socdaalka ama horayba u beeri lahaa ubaxyada quruxda badan, hubi inaad ogaatid dhibaatooyinka laga yaabo in ay soo baxaan iyo sida looga adkaado. Dhibaatooyinka ugu weyni waa cudurada lafaha iyo jabinta cayayaanka.
Noocyada Universal ee bannaanka u ah ee Central Russia - ku'saabsan "Macmacaanka Rossoshanskaya"
Waxaan fahamsanahay waxa farqiga u dhexeeya kaabajka Chinese iyo Peking, salad barafka. Miyuu ka fiican yahay cadahayaga?
Soo jiidashada qalafsanaanta: taariikhda hodanka iyo noocyada kala duwan ee Phalaenopsis casaan. Plant Care
Khamriga lo'da ee lo'da
Si loo fahmo sida wax soo saar leh lo'da lo'da ay tahay, qiimeynta xoolaha ayaa la sameeyaa. Waxay ka caawisaa sidii loo abuuri lahaa qabaa'ilka shaqsi kasta, oo sidaas darteed kor u qaada faa'iidada beeraha, sababtoo ah xayawaan aad u sarreeya, waa wax soo saar badan. Si habboon loo cabbiro xoolaha, waa lagama maarmaan in la ogaado dhammaan faahfaahinta nidaamka. Read More
Kala duwanaansho badan oo soo jiidasho leh oo badanaa soo jiitay - "aan la shaacin" currant cas
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cayayaanka Pion 2020